Indwangu Yezimpumputhe Indwangu | I-China Blinds Fabric Manufacturers kanye nabahlinzeki
Izindwangu zeZebra, futhi ezaqanjwa ngokuthi izindwangu zama-combi, indwangu engaboni yamakhethini, idizayini enhle yokumboza iwindi, yenza iwindi libe yinhle uma libukwa. Ngokusekelwe ekukhetheni okubanzi komklamo, izindwangu zeZebra zinikeza izixazululo ezingcono zokuhlobisa okungaboni. Hhayi kuphela ukuthi sigqugquzela imfashini nombono ezindongeni, silandela ngokuqinile indinganiso yamazwe omhlaba yokuvikelwa okunempilo kwemikhiqizo yendwangu. Izindwangu ezingaboni zeZebra ezinikeza ubumfihlo futhi zengeza imfashini kunoma yiziphi izindawo. ube imfashini eyengeziwe ekushiseni kwelanga i ...
I-ETEX iyaluka futhi isebenzisa amaqoqo amakhulu wezindwangu zamaRoma nezakhethini. Zombili izindwangu ezihlanganisiwe nezingafakiwe. Izindwangu zamaRoma nezakhethini zidinga umuzwa wesandla othambile kunokuqina njenge-roller, kulula kakhulu ukulungisa iphethini nokusebenza okuthambile okulengayo kwesihenqo noma umthunzi we-roman. Okwezindwangu zaseRoma: ● Ukwakheka: I-polyester engu-100%, izindwangu zelineni, noma ukuluka okuhlanganisiwe, ukhula lwotshani, i-velvet, ukotini ● Ukupheka: I-Acid Acid yokugcoba noma akukho okukhohlozayo ● Ububanzi: 140 / 280cm ububanzi ● Isibonelo: I-Plain, iTranslucent, .. .
Ama-ETEX akhiqiza izinhlobo ezahlukene zezindwangu ezimnyama zeBlackout Roller Blind. I-100% imnyama ngokuvikelwa kwe-UV, anti-umsindo. Ngezinto zokuphahla ezikhethekile nezendlalelo ezanele zokupheka, ikhwalithi yethu ye-blackout iqinile ngokwanele ukulungele ukukhanya kwelanga & nesimo sezulu esinamandla se-UV, ukuqina okuphezulu nokuma kwe-100% ngokuphelele. Hhayi kuphela ukuthi sigqugquzela imfashini nombono ezindongeni, silandela ngokuqinile indinganiso yamazwe omhlaba yokuvikelwa okunempilo kwemikhiqizo yendwangu. Izindwangu ze-Roller Blind zinikeza ubumfihlo futhi zengeza imfashini ...